မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးရင် ဒါ နိုင်ငံတော်၏ ဈာပန။ အမှောင်ချရန် သင့်မသင့်..?? “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးရင် ဒါ နိုင်ငံတော်၏ ဈာပန။ အမှောင်ချရန် သင့်မသင့်..??
Rozoner King တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း သေလို့ဂုဏ်ပြုဖို့နေနေသာသာ. သေတဲ့သတင်းပါ သေတဲ့သူ အတူတူ အမြုတ်ခံ လိုက်ရတယ်ဆိုတော့. တပ်မတော်သားတွေရေ . .သေသေချာချာ စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီနော်. . .
5 hours ago · Like ·9people
Ko Myoe Pro-Hell Dog (Sis Khway Wel Sar Farr)! WTF #$@^%&$#@
တပ်မတော်သားတွေရေ..တွေ့ တဲ့အတိုင်းပါပဲ...ဒီလိုအရေးအသားက ဘရိန်းဝပ်ခ်ျတွေပါ...စစ်သားတွေက လူတွေအပေါ် ကြင်နာသယောင်သူတို့ အသက်ထက် ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုး ဖော်ကြူးတဲ့ အရေးသား တွေပါ...တကယ်တော့စစ်တပ်မှာအမိန့်ကအဓိကပါ...နအဖ ဘာရေးရေး မယုံပါဘူး All bullshit!!!3 hours ago · Like · 1 person
Nautsoe Tapar စောစောစီးစီးငရဲပြည်ရောက်သွါးတော့နေရာကောင်းရတာပေ့ါ... ရဲသော်မသေ သေသော်ငရဲမလားဆိုတာသီးချင်းစာသားတွေပါ... ကိုယ်ပြုသမျှကံပြန်လာမှာပါ...
Sai Zaw pls let me share !
ရန် မျိုး အောင် ညာနေကျဟာညာမှာပဲလေ ပါးပါးလေးညာနေတာ လူတွေကိုလူလို့မှမမြင်တဲ့
ကိုရဲရင့်ငယ်၏ facebook မှ မျှဝေပါတယ်
Posted by အာဇာနည် at 3:45 PM